Ko kududzira backlinks kunowedzera sei nzvimbo yangu yepaiti paSERP?
Zvichida wakanzwa mashoko mazhinji anotyisa pamusoro pekuvaka remhinduro backlinks uye zvakashata zvakasarudzwa kune iyi nzira. Zvisinei, ndinoda iwe kutora nguva uye uswededze urongwa uhwu nepfungwa yakazaruka. Pasinei nedzidziso yakaipa yechirongwa ichi, kushandisa bhuku kupindura semusangano we backlink kunogona kukubatsira kuti uve nehukama hwakanaka nevanogona nevatengi uye uwedzere simba rako rekuisa mukati mechikwata chako chemusika. Zvisinei, iwe unofanirwa kuva nenzira yakarurama yekusika maonero backlinks kuwana zvakanaka SEO chikonzero. Kana zvisina kudaro, iwe unotarisa kunetseka mumaziso emitsheni yekutsvaga uye unogona kutowana chirango chemagadzirirwo ekuvakwa kwepammy.
Muchikamu chino, tichakurukura nzira itsva dzekuwana juisi yekubatanidza kubva kumashoko. Iwe unogona kukanganwa zvose zvawaverenga kare. Nzira yatinenge taudza iwe haina kutarisa semamwe maitiro ekugadzira mazano anoda kushandisa dofollow, nofollow, kutsvaga mazwi kana zvimwe zvipi zvawaiwanzozvinzwa.
Nzira itsva yekutaura remhinduro backlinks
Ngatitaurirei zvikamu zvipi zvaunoda kutevera kuti uwane unhu hwekutevera backlinks munguva pfupi.
Tsvaga maBloggi akakodzera
Pamutambo wekutanga wekambani yako yekuvakira mazano, unofanira kuwana mabhogi akakodzera ekugadzirisa hukama hwako ipapo. Iwe unofanirwa kutungamira tsvakurudzo yako yepamusika uye uwane webhutori dzinogamuchira mararamiro akakwirira uye kubatanidzwa. Hazvisi pachena kuti utsvake zvakanakisisa mabhizimusi mabhuku. Panzvimbo yazvo, unogona kuwana pakati pemap blogs PR kana maforamu ane zvimwe zvikamu zvakakura zvevanyori vanoshanda pazviri.
Kuti uwane zvaunoda, iwe unogona kungoisa mimwe mibvunzo muGoogle. Somuenzaniso, kana bhizimisi rako richibatira mune zvehutano, unogona kukumbira injini yekutsvaga mubvunzo "TOP medical blogs" kana "maforamu echiremba. "Somugumisiro, iwe uchapa runyorwa rweZV blogs zvichienderana nezvimwe zvikamu zvekugarisana uye zvinotaurira avo ma blogs anogamuchira.
Kana wawana zvakakodzera zvebhizimisi rako zvinoda web mabhizimusi, unogona kuramba uchibuda nehanzvadzi dzinotevera kubva kune vanotaura nezvebhuku ravo. Ichakubatsira iwe kuti uwedzere nheyo yako yevamwe masayiti.
Kuronga mabhogi ako
Shandisa RSS kunyoreswa kuGoogle Reader yekuchengetedza maBloggi mumubhizimusi wako.Gadzira mafaira akasiyana-siyana pane imwe nhepfenyuro yepaiti. Kuderedza izvi, iwe uchacherechedza zvikamu zvipi zvave zvichishandurwa munguva ichangopfuura.
Edza kuva wekutanga
Hazvibvumirwi kuvaka remhinduro backlinks munyaya inoshungurudza yenzira kunyora chete irrelevant, spammy comments. Iwe unogona kuva wekutanga unodzokorora mashoko pasi pepositi, asi mushure mekunge uchiverenga nekunyatsonzwisisa uye nekufunga pamusoro pehupenzi uye zvinonzwisisika kupindura. Kana yako huru yekubatanidza ichibatanidza uye inonamatira kusvika pane imwe nzvimbo, vamwe vatsananguri vangangosarudza pairi kuti vaone kuti uri ani. Ndicho chikonzero kana iwe uri wekutanga, kuchinja kwako kwakakwirira kudarika kana iwe uri kuenda kumutambo mushure mekune vamwe vakawanda vanotaura Source .